Inqubomgomo Yokubuyisa - The Kdom
Siyabonga ngokuthenga eThe Kdom!
Ngenxa yesidingo sethu esiphakeme nesilinganiso sokugculiseka kwamakhasimende we-5-star, asikho ngempela ukubuyisa, ukubuyiselwa kwemali, noma ukushintshana ngemikhiqizo yethu.
In KUKHULU Amacala, BONKE abathengisa NGABASEKUGCINENI
Umbuzo Obuzwa Njalo: Kungani ungavumeli ukubuyiselwa kwemali, ukubuyiselwa, noma ukushintshaniswa?
Isizathu esenza singavumeli ukubuyiselwa kwemali nezimbuyiselo kungenxa yokuthi izinto zethu zinomkhawulo kakhulu futhi zenzelwe wena. Uma ikhasimende lithatha isinqumo sokuthi bafuna ukubuyisa into, akuyona into esingakwazi ukuyiphrinta futhi ngenxa yalokho bagcina beyimfucuza ephelele. Isici esisodwa esisingenayo ukuthi abantu bavame ukuthenga online ngethonya. Imvamisa, bayazisola ngemuva kwamahora ambalwa okuthenga bese bexhumana nomthengisi ukuze ababuyisele imali njengoba babeguqula umqondo wabo ngakho. Siqaphele lokhu njengokuziphatha kwabathengi okujwayelekile kakhulu yingakho sinqume ukuthi kusizuzisa sethu sonke ukuthi sikhiphe inqubomgomo yokubuyisela imali ekuqaleni esibe nayo.
Asifuni ukuthi ucabange lokhu njengento embi. Njengeqembu, sizokwenza inkuthalo yethu efanelekile ukwenza u-100% aqiniseke ukuthi senza konke esingakwenza ukukugculisa njengekhasimende ngentengiso yakho entsha.
Sicela uqinisekise ukuthi u-oda into efanelekile, usayizi nombala. Sicela uqinisekise ukuthi ufunda izilinganiso ezingasebenza. Uma kukhona izinkinga nhlobo futhi uma udinga usizo, ngiyacela Xhumana nathi ngokushesha futhi sizobuyela kuwe ngokushesha okukhulu.
Ukuze sinciphise ubungozi bezinkinga zokusayizi, sinikeze ngamashadi wokubonisa usayizi wamakhasi wokucaciswa kwemikhiqizo yethu izicathulo zikanokusho, amabhuzu we-suede, amasinki, ama-slip ons, isitayela se-toms, ophaca.
Noma yiziphi izimangalo zezinto ezingalungisiwe / ezonakele / ezingonakele kufanele zilethwe kungakapheli izinsuku ezingama-30 ngemuva kokuba umkhiqizo usutholakele. Kumaphakeji alahlekile kuhambo, konke ukufakwa kwesicelo akufanele kuthunyelwe kungadluli izinsuku ezingama-30 ngemuva kosuku olilinganisiwe lokulethwa. Izimangalo ezithathwa njengephutha kithi zimboziwe ngezindleko zethu.
Uma ubona inkinga emikhiqizweni noma yini enye ku-oda, sicela usithumele i-imeyili ku-support@thekdom.com
Ikheli lokubuya lisethwe ngokwakhona embonini yethu. Lapho sithola ukuthunyelwa okubuyisiwe, kuzothunyelwa kuwe i-imeyili ezenzakalelayo. Ama-Returns angafunwanga anikelwe emalungeni ngemuva kwezinsuku ezingama-30. Uma ifekthri yethu ingasetshenziswanga njengekheli elibuyayo, uzoba nesibopho sokukhokhiswa okubuyisiwe okutholayo.
Ikheli Elilungile - Uma unikeza ikheli elithathwa njengelingenakwaniswa nguthumeli, ukuthunyelwa kuzobuyiselwa esikhungweni sethu. Uzoba nesikweletu sezindleko zokubhuka uma sesiqinisekisile ikheli elibuyekeziwe nawe.
Okungafunwanga - Ukuhambisa okungafunwa kubuyiselwe endaweni yethu futhi uzokhokha izindleko zokubuyiselwa kuwe.
Ibuyiselwe Yikhasimende - Kuhle ukuthi usithinte ngaphambi kokubuyisela noma yimiphi imikhiqizo. Asibuyiseli imiyalo yokuzisola komthengi.
Uma sesitholile into yakho, sizoyihlola bese sikwazisa ukuthi sesiyitholile imali yakho
into. Sizokwazisa ngokushesha ngesimo sembuyiselo yakho ngemuva kokuhlola into.
Uzothola isikweletu kungakapheli inani elithile lezinsuku, ngokuya ngezinqubomgomo ezikhipha ikhadi lakho.
Olandelayo xhumana nebhange lakho. Ngokuvamile kuba nesikhathi esithile sokucubungula ngaphambi kokuba imali ibhalwe.
Uma ukwenze konke lokhu futhi awukayitholi imbuyiselo yakho, ngiyacela Xhumana nathi
Uma uthola ukubuyiselwa kwemali, izindleko zokuthumela ngokuqinisekile zizodonswa kwimbuyiselo yakho.
Uma unemibuzo yokuthi ungayibuyisela kanjani into yethu kithi, Xhumana nathi
Ngiyacela, UNGAQHATHA Xhumana nathi Uma kunezinkinga nhlobo noma udinga olunye uhlobo losizo.